James Pradhan Biography | Hamro Kalakar
Facts of James Pradhan
Contact James Pradhan
Suggestion for James Pradhan
James Pradhan is Singer. He was born on 12th March in Kathmandu. His horoscope is Pisces. His marital status is Not Known. His height is5feet6inches. His favorite movie is Samjhana, favorite food is Nepali Food.
काठमाडौंको नरदेवीमा जन्मिएका जेम्स सानो छँदा पनि गीत गाउँथे । स्कुल कलेजमा गीत गाउन लगाउँदा उनी लजाई–लजाई गाउँथें ।
‘जीवन हाम्रो सङ्लो पानी हो, सलल बगौं दाजै खोलाझैं सलल’ निकै चल्तिको थियो । जेम्स स्कुल कलेजमा यही गीत गाउँथे । राष्ट्रिय गीत गाउँदा सिधा उभिएर गाउँथे । आधुनिक, लोक, पप, रक सबैखालका गीत गाउने उनी अग्रज कलाकार नारायण गोपाल, फत्तेमान, बच्चु कैलाशका गीत भने गाउनका लागि आकर्षित हुँदैनथे ।
चकचके, हाउडे स्वाभावका जेम्सलाई घरमा भविष्यमा यसले गरी खाँदैन भन्थे । पछि उनी साथीहरूसँग गीत गाउन थाले । जेम्स त्यो बेला मादलदेखि गिटार र ड्रमसम्म बजाउँथे । कोहीसँग नसिके पनि उनी सबैथोक साम्रोसँग बजाउँथे । बजाउन केही नपाए उनी टेबुल भए पनि ठटाउँथे ।
उनले थाहै नपाई गीत गाए पनि उनलाई म गायक, संगीतकार वा एरेन्जर बन्छु भन्नेचाहिँ कहिल्यै लागेन । योजना पनि बनाएनन् । परिवार डाक्टर, पाइलट वा इन्जिनियर मध्ये एक बन्नुपर्छ भन्थ्यो ।
कलेज पढ्दापढ्दै उनी रवीन बाम, राम्चा ज्यापुलगायतका केही साथीसँग धरान पुगे । धरान पुगेका साथीहरूले उनलाई भेडेटार जाऊँ भने । उनीहरू भेडेटार पुगे । उच्च पहाड, बादल लागिरहेको प्राकृतिक दृश्य, चिसो हावापानी । उनलाई लाग्यो, स्वर्ग भनेको सायद यही हो । जेम्सलाई भेडेटारको मनोरम दृश्यले मन त लोभ्यायो नै, जिन्दगीलाई एउटा बाटोमा डो¥यायो पनि । उनलाई त्यसपछि संगीतमा लाग्ने रहर पलायो ।
त्यहाँबाट फर्किएपछि उनी संगीत साधनामा तल्लिन हुन थाले । एल्बम निकाल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । सुरु गरे ‘भेडेटार’ नामक एल्बमको तयारी । लाइभ बाजासहित रेकर्ड भएको एब्लम पनि रिलिज भयो । तर, त्यो चलेन ।
उनको परिवार टेलिकम्युनिकेसन इक्यपुमेन्टको बिजनेस गथ्र्यो । परिवारको त्यही बिजनेसलाई साथ दिइरहेका जेम्स अब त्यो छाडेर पूरै समय संगीत साधनामा लागे ।
साथीहरूले कसैले लोक, कसैले लोकदाहोरी त कोहीले आधुनिक गीत गाऊ भन्ने सल्लाह दिन्थे । जेम्सलाई भने यीभन्दा पनि फरक दिन नसके कुहिरोको काग भइन्छ भन्ने लाथ्यो ।
त्यसैले उनी संगीतको औपचारिक कक्षा लिन नपाए पनि भेटे र सकेसम्म संगीतका किताब ल्याएर पढ्थे । संगीतकर्मीहरूसँग भेट्न रुचाउँथे । टेप रेकर्डरमा स्वर रेकर्ड गराउँथे र त्यो सुनेर सुधार गर्दै जान्थे । स्टुडियो निर्माणका लागि सामान जम्मा गर्न थाले । र, सानो आफ्नै होम स्टुडियो खोले । जहाँ उनी गीतसंगीतको काम गर्न थाले ।
जेम्सको ‘भै गो उनी जाऊ’ पहिलो चलेको गीत थियो, जसले उनलाई स्रोतामाझ चिनायो । यो गीतमा भीम तुलाधर र दीपक बज्राचार्यले सहयोग गरे ।
नवीन के भट्टराई, धिरज राई, मोहन भुषाल, योगेश्वर अमात्यका गीतहरूको अधिपत्य रहेको बेला त्यही सूचीमा जेम्स पनि मिसिए । उनको परिचयमात्रै बनेन, जिम्मेवारी पनि थपियो । उनीबाट स्रोताले नयाँ स्वादको अपेक्षा गर्न थाले । उनले स्रोताको नाडी छामे, स्रोताको टेस्ट केमा छ भन्ने थाहा पाए । अहिले मल्टिनेसनल कम्पनीका धेरै उनीसँगै ठोक्किन आइपुग्छन् ।
कोकोकोलादेखि लाइफब्वाय साबुनसम्म उनकै स्वर र कम्पोजमा रेडियो तथा टेलिभजिनमा घन्किरहेका छन् । यसले जेम्सलाई झनै थाहा भएको छ, स्रोताको चाहना के र कस्तो सुर र तालमा छ भन्ने । त्यसैले उनलाई गीत निकाल्न स्रोताको अपेक्षाबारे रिसर्च गर्नुपर्दैन ।
आफ्नाभन्दा अरुका गीतमा धेरै काम गरेका जेम्सले अहिलेसम्म करिब ५ दर्जन गीत रेकर्ड गराएका छन् । तर, उनका त्यस्ता धेरै गीत छन् जुन स्रोताले निकै मन पराएका छन् । दीपक बज्राचार्यका धेरै हिट नम्बरमा उनकै कम्पोज र एरेन्ज छ । दिपेशकिशोर, नवीन के भट्टराई र योगेश्वर अमात्यका गीतमा पनि उनले थुप्रै कम्पोज, एरेन्ज र शब्द छन् । ‘के म तिम्रो साथी बन्न सक्छु’ पनि उनकै गीत हो ।
James Pradhan Photo Gallery
James Pradhan Videos
✓ Muna Thapa Magar